सहिदको नाममा बहुप्राविधिक शिक्षालय - Everest Dainik - News from Nepal
सहिदको नाममा बहुप्राविधिक शिक्षालय
काठमाडौं, साउन १० । दशवर्षे जनयुद्धका सहिद कमलप्रसाद शर्मा दिनेश र गोविन्द बजगाईं राम्जीको स्मृतिमा जिल्ला सदरमुकाम चौतारामा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको छ । प्रदेश नं. ३ सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजना र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) नेपालको समन्वयमा शिक्षालय स्थापना भएको हो ।
शिक्षालयको नाम दिनेश राम्जी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय कायम भएको छ । सहिदको नाममा महाविद्यालय स्थापना भएपछि कमल शर्मा दिनेशकी जीवन संगिनी पूर्वविधायिका भगवती प्रधान र गोविन्द बजगाईं राम्जीकी पत्नी बिन्दा बजगाईंले खुसी प्रकट गरेका छन् । बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको खबरले जिल्लाभर उत्साह छाएको छ ।
यसै शैक्षिक सत्रबाट अध्यापन सुरु
बहुप्राविधिक शिक्षालयमा यही शैक्षिक सत्रदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधि दुई विषयको अध्यापन सुरु गरिँदै छ । ४८-४८ विद्यार्थी भर्ना गरेर दुई विषयमा अध्यापन थालनी गरिने शिक्षालय प्रमुख रामचन्द्र दाहालले बताए । भर्नाका लागि चौतारा बहुमुखी क्याम्पसमा फर्म वितरण गरिन्छ । सिटिइभिटीको वेभसाइटबाट पनि फर्म भर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तत्कालका लागि चौतारा बहुमुखी क्याम्पसको कक्षाकोठा प्रयोग गरेर अध्यापनको थालनी गरिने भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा शिक्षालय प्रमुख, वडाध्यक्ष र शिक्षाविद् सम्मिलित समितिले शिक्षालयको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नेछ । दोस्रो वर्ष बाली विज्ञान, तेस्रो वर्ष पशु विज्ञान, चौथो वर्ष हाइड्रोलोजी विषयको अध्यापन सुरु हुनेछ । २०८० सम्म पाँच विषयको अध्यापन व्यवस्थिततवरले गर्ने योजना छ । पूर्वसांसदसमेत रहेका नेकपाका नेता सुभाष कर्माचार्यको नेतृत्वमा बनेको सहजीकरण समितिले एक वर्ष अध्ययन गरेर शिक्षालयका लागि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं. ५ छापको आहालडाँडामा जग्गा सिफारिस गरेको छ ।
भवन बनाउन १७ करोड
९५ रोपनी क्षेत्रफल रहेको आहालडाँडामा शिक्षालयको दुईवटा बिल्डिङ बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १७ करोड विनियोजन भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र शिक्षालयको आफ्नै भवन हुनेछ । शिक्षालयका लागि आवश्यक बाँकी नौ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खोजी भइरहेको छ । ‘जनयुद्धका सहिदलाई स्मरण गर्दै प्रदेश नं. ३ ले बहुप्राविधिक शिक्षालय बनाउने निर्णय गर्यो,’ सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले भने, ‘सिन्धुपाल्चोकमा स्थापना भएको शिक्षालयबाट दोलखा, रामेछाप र काभ्रेका विद्यार्थी पनि लाभान्वित हुनेछन् ।’
प्रतिभावान् र गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिएको एवं आगामी वर्षदेखि नुवाकोटमा पनि सुरु हुने उनले बताए । दशवर्षे जनयुद्धका सहिद कमलप्रसाद शर्मा दिनेश र गोविन्द बजगाईं राम्जी दुवै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं. ४ कुबिन्डेका हुन् । शर्मा जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमिसार र बजगाईं कमान्डर थिए । २६ वैशाख ०६१ मा बन्दीपुरमा रहेको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको ब्यारेक आक्रमणका क्रममा दुवैको मृत्यु भएको थियो । उनीहरूको सहादतपछि तत्कालीन माओवादीले जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजनअन्तर्गत रहेको दिनेश राम्जी स्मृति ब्रिगेड स्थापना गरेको थियो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: बहुप्राविधिक शिक्षालय, सहिद